Akhri oo ha Qoslin |
Akhri oo ha Qoslin
Hargeisa(GNN):-Telifoonka iyo dhibkiisa sheekadan akhri oo ha qoslin !! haweenay soomaaliyeed oo aad saygeeda ugu hinaasi jirtay una ilaalin jirtay , ayaa waxay istidhi maalin maalmaha ka mid ah , bal xaajigaagii telefoon ka dabadir oo alaab u diro hakuu soo qaadee marka uu soo socdo
Telefoon kiisii bay garaacday , waxa ka qabatay gabadh yar , inta ay yaabtay ayay waxay waydiisay
Eeddo Aabbo Mee ?
Gabadhii yarayd ayaa waxay ugu jawaabtay : wuu tegey .
Waxay waydiisay : oo adigu tumaa tahay ?
Gabadhii yarayd waxay ugu jawaabtay : kowsar .
Waxay Hadana Waydiisay : Oo Hooyo Meeday ?
Gabadhii yarayd baa ugu jawaabay : hoosbay joogtaa .
Haweenaydii inta ay telefoonkii dhigtay iyada oo aad iyo aad u cadhaysan balaayadii dunida joogtay oo dhamina madaxeeda isugu yimaadeen oo ay boqol iyo boqol su’aalood iswaydiisay , oo ay fadhi iyo joogba diiday oo ay sare u qaylisay ayaa waxay tidhi :
oo caruur waaweyn oo hadlaysa baabuu leeyahay , intaas oo sanadoodna wuu iga qarinaayay inuu xaas kale leeyahay , weligayba waan ka shakisanaaye . shaw markan uu maalin oo dhan maqan yahay ee uu leeyahay shaqo ayaan ku maqanahay , saw naagtiisa kale ayuu ku maqan yahay , maanaan garan . aniga uun baa nacas ah oo meesha iska fadhiya .
Haweenaydii waxay kolba meel ka fad kudisoba , waxay go’aansatay inay telefoonkii mar kale ku celiso oo la hadasho inantii yarayd hooyadeed .
Telifoonkii bay dirtay , waxa ka qabatay inantii yarayd , waxay waydiisay : Eeddo kowsaray fariidaydiiyay aabbo ma soo noqday ?
Inantii yarayd waxay ugu jawaabtay : maya .
Hadana Waxay Waydiisay : Hooyo Meeday ?
Waxay ugu jawaabatay : hoosbay joogtaa .
Waxay ku tidhi : hooyo ii dhiib .
Yartii yarayd telifoonkii bay hooyadeed u gaysay
Haweenaydii oo telifoonkii dhegta ku haysa iyada oo fadhigii dhex meeraysanaysa oo aad iyo aadna u gurxamaysa , ayaa waxa isa soo agtaagtay gabadheedii yarayd ee kowsar oo gacanta ku haysa telifoon mobile ah oo ku leh : hooyo hoo Eeddo la hadal .
waxa ay ugu jawaabtay : hadhaw baan la hadli doonaaye iminka orodoo dusha qabo .
Inantii yarayd inta ay telifoonkii mobile-ka ahaa miiska saartay ayay dusha iska qabatay .
Haweenaydii oo aad u qaylinaysa ayaa telifoonkii waxay tidhi ; Eeddo hooyo ii dhiib .
Haweenaydii ayaa hadalkeedii waxay ka maqashay telifoonkii miiska saarnaa , inta ay sare u qaaday , ayaa waxay ogaatay cidda ay maanta oo dhan la hadlaysay inay ahayd inanteedii yarayd ee kowsar , waxaanay kaloo ogaatay in uu saygeedii telifoonkiisii guriga ku ilaaway .
Haweenaydii inta ay isku khajishay oo isla yaabtay oo hareeraheeda eegtay bal inay cidi maqlaysay iyo in kale , ayay kursigii iska fadhiisatay oo isku qabowday .
Bal hadaba arintan oo kale iyo qaar la mid ah baa iyaga oo aan layska hubsan guryo dumiya .